Ny lahatsoratr'i Bonnie Crater momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Bonnie Crater
Ny fanantenana ny faharanitan-tsaina artifisialy (AI) manova ny zava-drehetra dia niteraka buzz be tao amin'ny faritry ny varotra tamin'ny taona 2017, ary hitohy izany amin'ny taona 2018 sy ny taona ho avy. Ny fanavaozana toy ny Salesforce Einstein, ny AI voalohany feno ho an'ny CRM, dia hanome fahitana tsy manam-paharoa momba ny filan'ny mpanjifa ny mpivarotra, hanampy ny maso ivoho hamaha olana alohan'ny hahitan'ny mpanjifa azy ireo ary avelany hametraka ny traikefa manokana amin'ny marketing ny diplaoma izay tsy azo natao talohan'izay. Ireo fivoarana ireo no lohalaharana a
Nilaza izy ireo fa ny CRM dia mahasoa ihany toy ny angona ao. Mpivarotra an-tapitrisany no mampiasa Salesforce, saingy vitsy no manana fahatakarana marim-pototra momba ny angon-drakitra izay sintony, inona ny refy handrefesana, avy aiza izy io, ary hatraiza ny fatokisany azy. Raha mitohy miha-data hatrany ny marketing, izany dia manamafy ny filàna mahatakatra ny zava-mitranga any ambadiky ny sehatra miaraka amin'ny Salesforce, ary koa ireo fitaovana hafa. Ireto misy antony efatra